Onye ọ bụla nwere ike ịkụziri m otu esi agbakwunye backlinks dị ka o kwere mee?
N'ezie, ọ bụ usoro nke ịmepụta njikọ ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog dị ka ihe siri ike dị ka i nwere ike iche. N'igbu ya n'asụsụ Bekee a na-asụ, njikọ ụlọ na SEO na-anọchite anya azụmahịa bara uru. N'okwu dị mfe, ọ pụtara ịnweta backlinks na ibe gị ma nye ha na nloghachi. N'ezie, ị na-achọ maka atụmatụ ụlọ ọrụ na-ejikọta ya bụ eleghị anya ụzọ kachasị mma isi mee ka usoro izugbe gị dị elu na SEO. Ma tupu igosi gị otu esi tinye ndị backlinks - naanị ma dị jụụ - ka m nye gị okwu ịkpachara anya. Buru n'uche, na ndị na-esonụ njikọ ndụmọdụ ụlọ bụ 100% nti n'oge ahụ. Ma ọ dịghị nkwa ọbụla na ihe na-eme ka anyị dị mma taa ga-adị otu maka echi. Ya mere, n'okpuru ebe a bụ naanị ihe ndị bara uru dị irè maka oge. Echere m na nke a ga-enyere gị aka ịghọta otú ị ga-esi tinye backlinks gị na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog - na-enweghị ego ọ bụla bara ụba, nanị ịkwụ ụgwọ oge na mgbalị gị.
Ọ dịghị ihe dị iche iche gbasara ị nweta ụfọdụ backlinks bara uru na-ekepụta ihe ndị ị ga-eme.Ihe niile ị chọrọ ebe a bụ ide ọtụtụ ihe ma mee ya ugboro ugboro. Jide n'aka na engines ọchụchọ bụ isi ga-ahụ nke ọma na ịnọ gị - echefula iji nyeghachi mmelite na ọdịnaya nke blog gị. M n'onwe m na-akwado ịkụ nzọ na mma, kama ọtụtụ. M na-ekwu na ide ihe abụọ ma ọ bụ atọ na-egbu egbu bụ kpọmkwem ihe a ga-eme iji gbakwunye ụfọdụ backlinks na-akwado ọganihu gị. Na-echeta - enwere ezigbo mma ohere iji gị isi lekwasịrị Keywords n'ihi na onye ọ bụla blog post. Na, n'ezie, gbalịa ka ị ghara iji okwu ndị ahụ mechie, ọ gwụla ma ịchọrọ ka odide gị dị ka spam. Ime otú ahụ, tụlee itinye oge na njikọ njikọ site na ịde blọgụ ndị ọbịa, ide edemede ngwaahịa, na nkọwa dị mma, ma ọ dịkarịa ala na ntinye nke atọ nke isi ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ azụmahịa gị ma ọ bụ mkparịta ụka isiokwu.
Ochie ederede na isiokwu nchọpụta
Ọ dịghị mkpa ịsị na ịmepụta nyocha ọchụchọ kwesịrị ekwesị bụ ebe mbụ ịmalite ịmalite ịrụ SEO gị n'ọtụtụ. Banyere njikọ njikọ kpọmkwem, ị kwesịrị ịmara otú e si etinye backlinks na ederede arịlịka ziri ezi. Iji nweta ihe nile nọ na ya, egbula oge iji Google AdWords ma ọ bụ ngwá ọrụ ọ bụla iji mepụta otu isiokwu mkparịta ụka zuru ezu ọzọ - oge a ka ọ bụrụ maka njikọ ụlọ njikọ. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ bụrụ na ị na-ahọpụta ederede arịlịka kwesịrị ekwesị nke ọma, semantic na-eme uche. Dịka ọmụmaatụ, okwu nkịtị dị ka "ahịa ahịa mgbasa ozi ọha na eze" nwere ike inwe ihe yiri nke yiri ihe yiri nke ahụ. Ka o sina dị, ọnụ ụzọ na-emeghe mgbe niile maka ịbawanye okporo ụzọ gị - na-agbanwe otu okwu, ma ọ bụ na-ewere ihe kwesịrị ekwesị.
Ụlọ ọrụ Ịmepụta Ihe Na-edozi Ahụ na Interlinking
Kwụsịnụ ụfọdụ njikọ n'ime ụlọ na-egosi ụzọ site na ngalaba dị iche iche nke ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog. A na-atụ aro ka ị gbakwunye njikọ na ibe kachasị eleta, ma tinye njikọ kwesịrị ekwesị na ebe obibi gị ma ọ bụ ọdịda peeji. N'ezie, ụdị njikọ a enweghị ihe jikọrọ ya na nchịkọta ọchụchọ nke Google, ọ dịkarịa ala ozugbo. Ka o sina dị, ọ ka bụ ohere dị mma ọ bụghị nanị iji wuo njikọ ndị ọzọ ma na-enye aka na ụlọ ọrụ weebụ siri ike. Ka o sina dị, ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog n'ime ebe dị mfe ịnweta na onye ọrụ-ga-abụ mkpebi dị mma. E kwuwerị, ị nwere ike irite uru site n'ọkwá dị elu ka a na-enye gị ogologo oge - ọ bụ naanị n'ihi na ụlọ ọrụ ịntanetị gị dị mma ma na-ekweta na onye ọrụ ọ bụla na-anabata ya Source .